Waliin gahinsa bishaan dhugaatii qulqulluuf hirmaannaa humnoota misoomaa murteessaa ta'uu ibsame
omiyaa, hirmaannaa hawaasaa bara darbee cimsee rakkoolee dhiyeessii­fi dandeettii turan maqsuun uwwisa bishaan dhugaatii qulqulluu naannichaa 85 % irraan gahuudhaaf birrii biili­yoona 2 ol ramadee hojjetaa akka jiru beeksise.
Biirichatti Bakka Bu’aan Abbaa Adeemsa Hojii Dhimmoota Komini­keeshinii Ob. Tashoomee Waaqjiraa Gaazexaa Oromiyaaf ibsa kennaniin, karoora, KGT waggaa shaniitiin uw­wisa bishaan dhugaatii baadiyyaafi magaalaa dhibbaa dhibbaa waliin ga­huudhaaf hudhaaleen jiran adda ba­haniiru.Ilaalchi hamaan hirmaannaa hawaasaatiin bishaan dhugaatii qulqul­luu argachuun ni danda'amaa?Jedhu gaggeessaa,ogeessa,raawwataafi ha­waasa bira tureera.
Rakkoo kana furuudhaaf hojii ilaal­cha qaruu biirichi raawwateen hirmaan­naa humnoota misoomaa sadeeniin bishaan dhugaatii qulqulluu argachuun akka danda'amu hojii qabatamaa bara 5005 keessa hojjetameen mirkanees­suun akka danda'ame bakka bu'aan kun hubachiisaniiru.
Rakkooleen dhiyeessii waliin wal qabatanis: biiroon dafee caal-baasii baasuu dhabuu, bahee boodas geejj­ibni lafarra harkifachuun,meeshaalee tajaajila dhaabaniif meeshaa jijjiirraa hatattamaan dhiyeessuu dhabuun akka jirutti ta'ee,dandeettiin kana raawwatu dhabamuun bal'inaan turanniru kan jedhan Ob.Tashoomeen, rakkoon kun furmaata akka argatuuf Dhiyeessiitiinis biirichi,qophii karooraa keessatti caal-baasii baaseen paampiiwwan harkaa 2000 ta'an marsaa duraaf galanii qoo­damaa kan jiran yommuu ta'u,dablataanis dhiyaachuu irratti akka argaman ibseera. Akkasumas,dandeettiin raawwachi­isummaa hojjettootaafi ogeessotaa akka cimuuf leenjiiwwan garagaraa kenna­maa akka ture biirichi dabalee eereera.
Kana bu'uura godhachuudhaan,bara kana uwwisa bishaan dhugaatii naan­noo Oromiyaa %71.3 jiru %85 irraan gahuudhaaf piroojekti bishaan dhugaatii baadiyyaa 180 fi kan magaalota 28 haaraa ijaarsisuuf akka mootum­maatti qorannoon xumuramuusaa Ob. Tashoomeen dubbatanii,walumaagala, bajata Mootummaan Naannoo Oromi­yaa ramadeefi bajata MDG, dhaabbilee mit-mootummaa kanneen akka sagantaa Wash, Unicef birrii biiliyoona 2.09 oliin piroojektoota kuma 15 ol hojjechuuf ka­roorri qabamee hojiitti seenameera.
Sadarkaa biiroofi godinaatti, piroojektoonni sagantaa MDGfikanneen biroodhaan otoo hin xumuramiin as darban xumursiisuudhaafis xiyy­eeffannoon kan itti kenname yoo ta'u, boolla gadi fagoo 241 qotuufi suphaa elektiroomekanikaalaa 1020 hojjechuuf karoorfameera.Kana malees, sagantaa­lee deeggarsa dhaabbilee adda addaa kan akka Unicef, IDA,IDC,AfDB fi sagan­taa Washn bishaan dhugaatii baadiyyaa guutuuf piroojektoonni bulaniifi haaraa ijaaraman akka milkaa’aniif qophiin marti xumuramuusaa bakka bu’aan kun himaniiru.
Hirmaannaa hawaasaa bara 2005 keessa finiinaa dhufeen hojiin gaariin hojjetamuusaa Ob. Tashoomeen eeranii, bara kanas kana itti fufsiisuudhaan hirmaannaa hawaasaatiin burqaa ijoo 4614 ijaaruu, boolla harkaa sadarkaa maatii 15,382 fi boolla harkaa sadar­kaa hawaasaa 4,303 hojjechuuf karoor­fameera.